अझ धेरै गर्न बाँकी छ - विशेष - नारी
अझ धेरै गर्न बाँकी छ
कानुन कोर्टमा मात्र सीमित विषय होइन–नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (नेपाल बार काउन्सिल) को अधिवक्ता तहको बाइसौं परीक्षामा नेपालभरिबाटै सर्वोत्कृष्ट अंक ल्याउने सुरभीले भनिन्–मैले कानुन पढेको सामाजिक न्यायका लागि हो । कानुनी क्षेत्रमा महिला वकिलहरू प्राक्टिसमा आउन सक्दैनन् भनिन्छ तर आगामी पुस्ता क्रमश: परिवर्तन हुँदैछ । हरेक क्षेत्रमा महिलाहरू आफ्नो फरक पहिचानका लागि लड्दैछन् ।
पुरुष हावी भएको क्षेत्र एवं पेसामा यसरी महिला आउनु चानचुने कुरा होइन, अहिलेसम्म यो क्षेत्रमा परम्परागत प्राक्टिस नै हावी छ । डाक्टरले मान्छेको ज्यान बचाएजस्तै वकिलले पनि मानिसलाई बचाउने काम गर्छ तर अहिले कोर्ट प्राक्टिसमा जो ठूलो स्वरले बोल्न सक्छ, बाझ्न सक्छ र जसको पहुँच माथि छ उनीहरू नै अगाडि रहँदै आएका छन् । यसले बोलेर खान सक्छ भन्ने जस्ता मानिसलाई वकिलको ट्याग लगाइन्छ । साइन्समा ए लेभल सिध्याएर पनि विदेश पढ्न जान मन नगरेकी सुरभीले सानैदेखि नेपाली समाजका सामाजिक मुद्दाहरूसँग साक्षात्कार हुने अवसर प्राप्त गरिन् । २५ वर्षीया सुरभी भन्छिन्–‘एक्टिभिस्ट आमाको प्रेरणा एवं छत्रछाँयाका कारण म नेपालका सामाजिक मुद्दाबाट भागेर टाढा जान सकिन । एउटा रुखबाट स्याउ झर्छ तर रुखभन्दा धेरै टाढा जान सक्दैन । ममा यही सिद्धान्त लागू भयो ।’
खुसी प्राप्त गर्न विभिन्न खालका पुस्तक पढ्ने तथा ट्राभल गर्न रुचाउने सुरभी नयाँ परिवेश, नयाँ वातावरण एवं नयाँ मानिसहरूसँगको अन्तक्र्रियाद्वारा आफूमा जुन परिवर्तन आउँछ त्यसले सबैभन्दा धेरै आत्मविश्वास र सशक्तीकरण ल्याउनेमा विश्वास गर्छिन् । सुरभीले भनिन्–अब छोरीलाई भन्दा पनि छोरालाई सिकाउन जरुरी छ नेपाली परिवेशमा, चाहे त्यो घरको काम होस् वा स्वतन्त्रता प्रयोग गर्ने कुरा होस् । केटाहरूलाई रुनु हँुदैन भनेर होइन कसैलाई पनि रुवाउनु हँुदैन भनेर सिकाउने बेला आएको छ । पारिवारिक जिम्मेवारी बहन गर्ने कुरामा छोराछोरी दुवैलाई जिम्मेवार बनाउनु जरुरी छ । सुरभी सोच्छिन्, हामी केटीहरूलाई मात्र किन जब साँझ पर्‍यो ओहो अब घर पुगिहाल्नुपर्छ भन्ने भावना आउँछ ? के यो हाम्रो मूल्य, मान्यता, संस्कार–संस्कृतिको प्रभाव हो हामी महिलामाथि ? के केटाहरूमा पनि यस्तै भावना आउँछ ? अब छोरीहरूलाई यस्तो मनोदशाबाट गुजार्दै हुर्काउन नहुने उनको तर्क छ । सामाजिक नेपालमा न्यायका लागि केही गर्ने योजना बनाएकी सुरभी भन्छिन्–समाज परिवर्तन हुँदैछ तर अझ धेरै गर्न बाँकी छ ।
भाद्र २१, २०७४ - सबैभन्दा धेरै रोयल्टी बुझ्ने गायिका
वैशाख २७, २०७४ - म देशका लागि के गर्न सक्छु ?
पुस १९, २०७३ - धेरै हाई आउनु जोखिमपूर्ण